Nhau - Chii chinonzi IX resin kumutsidzirwa?
Mukufamba kweimwe kana akawanda maekisheni ebasa, iyo IX resin inozopera, zvichireva kuti haichakwanise kufambisa ion shanduko. Izvi zvinoitika kana ioni inosvibisa yakasunga kunosvika kune ese anowanika masaiti anoshanda pane resin matrix. Taura zvakapusa, kumutsirwazve chiitiko uko anionic kana cationic anoshanda mapoka anodzoreredzwa kune yakashandiswa resin matrix. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekushandisa kwekemikari inogadziridza mhinduro, kunyangwe iyo chaiyo maitiro uye matsva anoshandiswa anoenderana pane akati wandei maitiro maitiro.
Mhando dzeIX resin yekumutsidzira maitiro
IX masisitimu anowanzo kutora fomu yemakoramu ane imwe kana mamwe marudzi eresin. Pakati pebasa rebasa, rwizi runonongedzwa mukoramu yeX uko inobata neresini. Iyo yekumutsiridza kutenderera inogona kuve imwe yemhando mbiri, zvinoenderana nenzira iyo iyo inogadzirisazve mhinduro inotora. Izvi zvinosanganisira:
1）Co-kuyerera kumutsidzirwa (CFR). MuCFR, iyo inogadzirisazve mhinduro inotevera nzira imwecheteyo semhinduro yekurapwa, iyo inowanzo kuve kumusoro kusvika pasi mukomboni yeX. CFR haiwanzoshandiswa kana kuyerera kukuru kuchida kurapwa kana mhando yepamusoro ichidikanwa, kune yakasimba acid cation (SAC) uye yakasimba base anion (SBA) mabhedhi emabhedha sezvo yakawandisa mhinduro yekugadzirisa ingazodikanwa kuti iitezve resin. Pasina kumutsiridzwa izere, resini inogona kudonhedza ioni ine utachiona murukova rwunorapwa pane inotevera sevhisi inomhanya.
2）Reverse kuyerera regeneration (RFR). Iyo inozivikanwa zvakare seyekuyerera kwekudzokororazve, RFR inosanganisira jekiseni regenerant mhinduro mune yakatarisana nedivi rekuyerera kwebasa. Izvi zvinogona kureva kukwidza kurira / kuderera kwekudzokorodza kana kuyerera kurodha / kukwidziridzwa kwekumutsiridza kutenderera. Chero zvazvingaitika, iyo inogadzirisazve mhinduro inosangana neisina kupera simba resini matanga kutanga, zvichiita kuti iyo yekumutsiridza maitiro inyatsoita. Nekuda kweizvozvo, RFR inoda mhinduro isingadzokeri uye inoguma nekudonha kushoma, kunyange zvakakosha kuti uzive kuti RFR inoshanda chete zvinobudirira kana matanda eresin agare munzvimbo mukuvandudzwa kwese. Naizvozvo, RFR inofanira kushandiswa chete nemubhedha wakazara IX makoramu, kana kana imwe mhando yechigadziro chekuchengetedza ichishandiswa kudzivirira iyo resin kuti isafambe mukati mekoramu.
Matanho anobatanidzwa muIX resin patsva
Matanho ekutanga mukutangazve kuita anosanganisira anotevera:
Backwash. Kushambidza kumashure kunoitwa muCFR chete, uye kunosanganisira kushambidza resini kubvisa zvisikwa zvakasungirirwa uye kugovera zvakare mabheji akaumbwa. Iko kushushikana kwemabheji kunobatsira kubvisa chero yakanaka tese uye maiseti kubva kune resin pamusoro.
Regenerant jekiseni. Mhinduro inogadziriswa inoiswa mukati meiyo IX ikholamu pane yakaderera kuyerera mwero kubvumidza yakakwana kusangana nguva neiyo resin. Iyo yekumutsiridza maitiro akaomesesa kune akavhenganiswa emubhedha mayuniti ayo ese ari maviri anion uye cation resins. Mumubhedha wakasanganiswa IX kupora, semuenzaniso, ma resini anotanga apatsanurwa, kozoita regenerant inogadziriswa, ichiteverwa neasidhi inogadziridza.
Regenerant kusimuka. Iyo inogadziriswazve inoburitswa kunze zvishoma nezvishoma neinononoka kuunzwa kwemvura yekushambidza, kazhinji panguva imwechete yekuyerera senge inogadzirisazve mhinduro. Pamakamuri akavhenganiswa emubhedha, kusuduruka kunoitika mushure mekushandisa kweimwe neimwe yemhinduro dzinogadzirisazve, uye ma resini anobva asanganiswa nemhepo yakamanikidzwa kana nitrogen. Kuyerera kweruzhanho rweiyi nhanho "inononoka kushambidza" kunofanirwa kuve kwakanyatso chengetedzwa kudzivirira kudzivirira kukuvara kune resin marozari.
Sukurudza. Chekupedzisira, iyo resin inoshambidzwa nemvura panguva imwechete yekuyerera senge sevhisi yekutenderera. Iyo yekugezesa inotenderera inofanira kuenderera kudzamara tarisiro yemhando yemvura yasvika.
Ndezvipi zvinhu zvinoshandiswa IX kudzorerwa patsva?
Imwe neimwe resin mhando inoda kune yakamanikana seti yezvingaite kemikari inogadziridza. Pano, isu takatsanangura zvakajairika zvinogadzirisazve mhinduro neresin mhando, uye takapfupisa dzimwe nzira pazvinoshanda.
Yakasimba acid cation (SAC) inogadzirisazve
SAC resins inogona kungogadziriswazve ine yakasimba acids. Sodium chloride (NaCl) ndiyo inowanzoitika inogadziridza yekunyorovesa mafomu, sezvo iri shoma uye iri nyore kuwana. Potassium chloride (KCl) imwe nzira inoenderana neNaCl kana sodium isingadiwe pakurapwa mhinduro, nepo ammonium chloride (NH4Cl) inowanzoiswa panzvimbo yekupisa condensate softening application.
Demineralization idanho-nhanho maitiro, yekutanga yacho inosanganisira kubviswa kwecations uchishandisa SAC resin. Hydrochloric acid (HCl) ndiyo inonyanyo shanda uye yakajairika-inoshandiswa regenerant yekumisikidza mafomu. Sulfuric acid (H2SO4), nepo imwe nzira isingadhuri uye isinganetsi kune HCl, ine yakaderera mashandiro ekushandisa, uye inogona kutungamira kune calcium sulphate kunaya kana ikaiswa yakanyanya kukosheswa.
Asina simba asidi cation (WAC) inogadzirisazve
HCl ndiyo yakachengeteka, inoshanda kwazvo inogadzirisazve yekushandisa dealkalization. H2SO4 inogona kushandiswa seimwe nzira kune HCl, kunyange ichifanira kuchengetwa munzvimbo yakadzika kudzivirira calcium sulphate kunaya. Dzimwe nzira dzinosanganisira dzisina simba, seacetic acid (CH3COOH) kana citric acid, ayo anoshandiswa dzimwe nguva kugadzirisa resini dzeWAC.
Yakasimba Base Anion (SBA) inogadzirisazve
SBA resins inogona kungogadziriswazve ine yakasimba mabhesiki. Caustic soda (NaOH) inowanzo shandiswa seSBA inogadzirisazve demineralization. Caustic potash inogona zvakare kushandiswa, asi inodhura.
Yakaneta Base Anion (WBA) resins
NaOH inenge yagara ichishandiswazve neWBA patsva, asi alkalis isina kusimba inogona zvakare kushandiswa, senge Ammonia (NH3), Sodium carbonate (Na2CO3), kana kusimiswa kweimu.
Post nguva: Jun-16-2021